सौन्दर्य प्रतियोगिताका उत्साहीहरुका लागि नयाँ बाटो पहिल्याउँदै मिस यूनिभर्स नेपाल « LiveMandu
१९ कार्तिक २०७७, बुधबार २१:००
Published On : १९ कार्तिक २०७७, बुधबार २१:००
ब्रेभ, बोल्ड एण्ड ब्यूटिफूल प्रा.लि. का फाउण्डर र २०१७ को मिस यूनिभर्स नग्मा श्रेष्ठले यही असोज २२ गते, बिहिबारका दिन, ए.पि. वान एच् डि मा प्रत्यक्ष प्रसारित कार्यक्रम “द नग्म्याटिक शो” मार्फत उक्त MUN २०२० एप लन्च गर्नु भएको थियो ।
यस मिस यूनिभर्सका विजेताले रु. १० लाख नगद उपहार प्राप्त गर्ने छन् जुन नेपाली सौदर्य प्रतियोगिताहरु मध्यकै सर्वाधिक धन राशि रहको घोषणा नग्मा श्रेष्ठले गर्नुभएको थियो ।
यस MUN २०२० एपलाई एन्ड्रोइडको गुगल प्ले स्टोर तथा एप्पल आइ ओ एस दुवैमा लन्च गरिएको छ । सहभागी हुने पहिलो २० प्रतियोगीहरुको लागि निःशुल्क रजिष्ट्रेसन रहेको छ र पछिल्लो ५००० प्रतियोगीहरुका रु.१००० तथा देश बाहिर रहेका नेपालीहरुको लागि ५० डलर रजिष्ट्रेसन शुल्क निर्धारण गरिएको छ ।
तस्वीरः पूर्व मिस नेपाल नग्मा श्रेष्ठको फेसबुक
यस प्रतियोगिताका लागि आवेदन तथा दर्ताको घोषणा एक प्रत्यक्ष प्रसारित कार्यक्रम मार्फत गरिएको थियो । उक्त कार्यक्रममा अथितिको उपस्थितिका साथै मिस यूनिभर्स नेपाल २०२० का एम्बेसेडरहरुले प्रदान गर्नुभएको योगदानहरुलाई प्रस्तुत गरिएको थियो ।
“द नग्म्याटिक शो” मार्फत नग्मा श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ, “पेजेन्ट्री केही मानिसहरूका लागि विशेषाधिकारमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन, बरु यो धैरे व्यक्तिहरुका लागि अवसर हुनुपर्दछ ।”
ईच्छुक महानुभावहरुको उत्साहजनक प्रतिक्रीयाबाट हामी अभिभूत भएकोले रेजिष्ट्रेशन मिति यही कार्तिक २५ गते बिहान १० बजेसम्मको लागि थप गरिएको छ ।